China Bakeware nge ehlukanisayo SKU NO.2640-2642 Abakhiqizi futhi Suppliers | SJZ JINXUAN
Emangalisayo Ikhishi-to-Ithebula Versatility Bhaka, ukukhonza, esitolo, futhi reheat konke bakeware efanayo. Izitsha ingilazi baking enza kube lula ukupheka ukudla ngaphambi kwesikhathi kanye nokugcina esiqandisini noma efrijini kamuva. Okuhle kunakho konke ukuthi ushintsho bakeware kahle kuhovini kunoma ithebula izilungiselelo bakhonze ngomusa, futhi okusele angaya asebuyele efrijini ekupheleni ebusuku-asikho isidingo ezingcolile izitsha eziningi. Sicela wazi: DO NOT ukuhambisa ingilazi bakeware ngokuqondile efrijini ukuze kuhhavini. Ake ...
Bhaka, ukukhonza, esitolo, futhi reheat konke bakeware efanayo. Izitsha ingilazi baking enza kube lula ukupheka ukudla ngaphambi kwesikhathi kanye nokugcina esiqandisini noma efrijini kamuva. Okuhle kunakho konke ukuthi ushintsho bakeware kahle kuhovini kunoma ithebula izilungiselelo bakhonze ngomusa, futhi okusele angaya asebuyele efrijini ekupheleni ebusuku-asikho isidingo ezingcolile izitsha eziningi.
Sicela wazi: DO NOT ukuhambisa ingilazi bakeware ngokuqondile efrijini ukuze kuhhavini. Ake ukudla ncibilika ngaphambi ukupheka noma reheating kuhhavini. Qinisekisa ukuthi usebenzisa i-potholder lapho usingatha ashisayo ingilazi bakeware izitsha.
Izitsha ingilazi baking ingasetshenziswa ukubhaka noma reheat ukudla kuhovini ezivamile noma-microwave oven. Bona phakathi ingilazi izinhlangothi uvumele kwamandla NEKUKHULUMA ngentuthuko ukudla lapho ukubhaka, ukuhlinzeka isilawuli wanezela phezu imiphumela yokugcina.
Lezi bakeware zenziwa nge borosilicate ingilazi-ekahle ukunwetshwa ezishisayo ngakhoke kancane othambekele sokuqeda lapho zihlatshwa nokushintshashintsha kwezinga lokushisa.
Sicela wazi: Glass bakeware akufanele isetshenziswe ngaphansi hlupha, kwi stovetop, noma ngotshwala noma okusemathinini ukushisa izitofu njengoba ukushisa umthombo oqondile.
Lezi Bakeware nge ehlukanisayo kungahlukanisa ukudla effeciently, bagweme zingcoliswe nezinye amaphunga, ngakho ungakwazi ukujabulela ukudla yasekuqaleni fresh.
Previous: Bakeware e Umumo Square
Okulandelayo: Casserole e Okusaqanda Umumo SKU NO.277-278-279-2710-2711
Bakeware e Umumo kukanxande nge PP isivalo
Bakeware e Umumo oblong nge Yiphathe SKU NO.261 ...
Bakeware e kukanxande Umumo SKU NO.2612-2617
Bakeware e Umumo Okusaqanda
Bakeware e Umumo Okusaqanda nge Yiphathe SKU NO.226-269
[Kopisha] Bakeware nge ehlukanisayo SKU NO.2643
Glass Cups With Silicone Lid, Borosilicate Glass Uviniga & Amafutha Bottle, Borosilicate Glass Bottle With Bamboo Lid, Bottle Borosilicate Glass Nge Lid, Glass Cups With Silicone Sleeve, Borosilicate Glass Bottle,